Lacag Waxbarasho Bilaash ah
Deeqda Dhigaalka Waxbarashada Canada
Deeqda Ukeydsiga Waxbarashada Kanada (CESG) ayaa ah dariiq kale oo Dowladda Kanada ku bixiso lacag loogu talagalay waxbarashada ilmahaaga waxa ka dambeeya dugsiga sare. Markaad lacag gashato RESP, Dowladda ayaa ku dari doonta in ka badan sidii ay uga caawin lahayd inuu si degdeg ah lacag keysidku u kordho.
Immisa Ayuu Ilmahaygu Heli Karaa?
Qof kasta ayaa heli kara Deeqaha Ukeydsiga Waxbarashada Kanada, laakiin inta ay ku dari doono Dowladdu ayaa ku xiran dakhliga saafiga ee qoyska waxa ka dambeeya cashuuraha. Markaad wax ku biiriso qorshaha RESP ee ilmahaaga, Dowladda ayaa ku dari doonta:
40% wax ka badan: Haddii u dakhligaagu ka yar yahay $45,282
30% wax ka badan: Haddii u dakhligaagu u dhexeeyo $45,283 - $90,563
20% wax ka badan: Haddii u dakhligaagu ka yar yahay $90,564
Ilaa ugu badanaan $7,200 cimriga ah oo ilmihii kasta ah.
Sideen ku helaa Deeqda Ukeydsiga Waxbarashada Kanada?
Waa inaad lacag ku biirisaa Qorshaha RESP si aad uga hesho deeq u-dhiganta Dowladda. Adiga iyo ilmahaaguba waxaad u baahan tihiin inaad lahaataan Lambarka Ceymiska Bulshada si aad iskaga diiwaangalisaan.
Deeqda UKEYDSIGA Waxbarashada Kanada ayaa kaliya loo isticmaali karaa waxbarashada dugsiga sare waxa ka dambeeya. Ilmahaagu waa inuu ISTICMAALAA AMA WAAYAA! Haddii uu ilmahaagu sii wadan waayo waxbarashada waxa ka dambeeyaa dugsiga sare, Dowladda ayaa dib ula noqon doonta lacagta ay deeqda kugu siiyeen.